पहिरोले गुल्मीमा २४८ परिवार विस्थापित ! - Sagarmatha Online News Portal
पहिरोले गुल्मीमा २४८ परिवार विस्थापित !
काठमाडौं । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पहिरोबाट ३ सय घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा २ सय ४८ घर विस्थापित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले जानकारी दिए ।
अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोले इस्मा गाउँपालिकामा २ जनाको मृत्यु भयो भने ५ जना घाइते भए । पहिरोले गाउँपालिकाको-१ मा १ सय ३६ घर, वडा नम्बर-४ मा ५० घर र वडा नम्बर ६ मा ८ घर विस्थापित भएको पन्थीले जानकारी दिए ।